Obama Oo Digniin Culus U Diray Madaxweynaha Xilka Kala Wareegay ee Donald Trump | Berberatoday.com
Obama Oo Digniin Culus U Diray Madaxweynaha Xilka Kala Wareegay ee Donald Trump
May 9, 2017 - Written by Berbera Today
USA(Berberatoday.com)-Madaxweynihii hore ee Maraykanka, Barack Obama, ayaa uga digay ninka xilka
kala wareegay ee Donald Trump, in uu Michael Flynn ka dhigto lataliyihiisa ammaanka qaranka, sida uu xaqiijiyay Aqalka Cad.
Mas’uuliyiin ka tirsanaa maamulkii Obama ayaa sheegay in madaxweynaha hore uu digniintan Trump u jeediyay wax ka yar 48 saac markii uu ku guulaystay doorashadii madaxtinnimada ee dhacday bishii November 2016.
Mr Flynn ayaa bishii February laga qaaday xilka lataliyaha ammaanka qaranka oo uu Trump u ahaa, ka dib markii lagu helay in uu ka been sheegay xiriir uu ula sameeyay safiirka Ruushka u fadhiya Maraykanka.
Xoghayaha saxaafadda ee Aqalka Cad, Sean Spicer, ayaa sheegay in “ay dhab tahay in madaxweyne Obama uu muujiyay sida aanu u taageersanayn jeneraal Flynn,” balse waxa uu intaa ku daray in taasi aanay la yaab lahayn maadaama uu jeneraalka usoo shaqeeyay Obama, markii dambana uu dhaliilay sida uu madaxweynahaasi u wajahayo khatarta kusoo foolka leh Maraykanka.
Maamulka Obama ayaa sanadkii 2014 xilka ka qaaday Mr Flynn, oo ahaa madaxa laanta sirdoonka gaashaandhigga, asagoo lagu eedeeyay maamul xumo iyo xanaaq badan.
Obama ayaa la sheegay in uu rumaysnaa in Mr Flynn aanu u qalmin xil sare.